Iindawo ezigqibeleleyo zokunikela ngeenwele kunye nokuKhokela ngokuKhawuleza - Ukunyusa Imali Iingcinga
Iindawo ezigqibeleleyo zokunikela ngeenwele kunye nokuKhokela ngokuKhawuleza
Ukunikela ngeenwele yindlela enkulu, engabizi kakhulu yokuba abantu babandakanyekeIsisa. Uninzi lweminikelo yeenwele ivela kubantwana abafuna ukunceda abanye abantwana; Nangona kunjalo, nabani na anganikela ngeenwele. Nokuba uyenza wedwa okanye uya kumsitho wokusika iinwele kunye nomnikelo, awusoze uzisole ngokunceda umntu osweleyo.
Izitshixo zothando yeyona yeyona nto yaziwayo kunye neyona inde yokubaleka. Umsebenzi weLocks yothando kukwenzaiinwele zokufakelwakubantwana abahlelelekileyo ngokwezimali abahlupheka ixesha elide ekulahlekelweni ziinwele kuso nasiphi na isigulo. Umnikelo weenwele kufuneka ubuncinci ube zi-intshi ezili-10 ubude kwaye uboshwe kwiamahasheokanye ukoluka. Yonke imibala yeenwele (ngaphandle kwegrey) kunye nezinto ezenziwayo zamkelekile. Unokude unikele ngeyakhoImvumeokanyeiinwele ezinemibalaukuba nje ayonakalanga. Ukuba unokuprinta iinwele ifomu yomnikelo Ukusuka kwiLock of Love iwebhusayithi, yenza njalo. Nangona kunjalo, awuyidingi ukunikela ngeenwele. Endaweni yoko, unokuprinta igama lakho nedilesi kwiphepha elipheleleyo kwaye ulithumele kunye neenwele:
Imifanekiso yeZimvo zokuQokelelwa kweNgxowa-mali
234 eseMazantsi eBlvd.
IWest Palm Beach, i-FL 33405-2701
thanda into oza kuyithetha kwisithandwa sakho
IiWigs zaBantwana ikhona ukunceda abantwana abasokolayo kwiziphumo zokulahleka kweenwele ezibangelwa nayiphina imeko, kubandakanya neengozi zokutsha,umhlazaokanye alopecia. Ngokufana neLocks of Love, iiWigs zaBantwana zibonelela ngeenkqubo zeenwele. Inkqubo yeenwele ababonelela ngayo ivumela umntwana ukuba enze imisebenzi yesiqhelo ngaphandle kokukhathazeka malunga nokuba ngaba iinwele zakhe ziya kuwa. Abantwana banokuya nokuqubha kwiiWigs zaBantwana inkqubo yeenwele. Lo mbutho ufuna ubude beenwele ezili-intshi ezili-12, kodwa abazamkeli iinwele ezingwevu okanye ezonyango. IiWigs zaBantwana zisebenza namakhulu iindawo zokuphumla phesheya kwe-U.S. ezibonelela ngeenkonzo zasimahla okanye ezinesaphulelo kubantu abanikela ngeenwele kwesi sizathu. Nje ukuba uchebe iinwele zakho kwaye ukhuphele ifom efanelekileyo , ungathumela iinwele zakho ku:
IiWigs zaBantwana-Umnikelo weenwele
I-24231 Centre Ridge Road
IWestlake, eOhio 44145
IiMaggie's Wigs 4 zaBantwana baseMichigan
IiWigs 4 zaBantwana yiumbutho ongajonganga kwenza nzuzoekhonza abantwana abaneminyaka eli-18 nangaphantsi abahlala eMichigan kwaye banengxaki yokulahleka kweenwele. Ngelixa le nkqubo ijolise kwimeko yaseMichigan, ubungakanani bayo bude kakhulu. Iziko lentlalontle aliboneleli kuphela ngeenkqubo zeenwele zabantwana, kodwa likwabonelela ngemibutho yezempilo kunye nenkxaso epheleleyo. Iminikelo yeenwele kwiiMaggie's Wigs zaBantwana kufuneka okungenani zibe zi-intshi ezilishumi. Iinwele azinakunyangwa ngamachiza okanye zinombala kwaye azinakuba ngaphezulu kwe-10% grey. Ukuba uhlala eMichigan, ungandwendwela Yiya kwindawo eluhlaza, emi ngakwiziko lempilo. Bahlawulisa i-40 yeedola ngokubonisana, ukusika kunye nesitayile, kodwa i-50% yemirhumo iya ngqo kwi-Maggie's Wigs 4 Kids, kunye neponytail yakho. Ukuba awuhlali kufutshane, ungathumela umnikelo wakho ku:
IiWigs 4 zaBantwana-Umnikelo weenwele
30126 Harper Ave.
ISt.Clair Shores, MI 48082
Abantwana abanokulahleka kweenwele
Abantwana abanokulahleka kweenwele sisibonelelo senkxaso-mali esingenzi nzuzo esibonelela ngeewigi zabantwana abadinga iU.S. Inkqubo inikezela ngeephakeji zokutshintsha iinwele zexesha elide kunye nokukhethwa kwexesha elifutshane kubantwana abaphulukene neenwele okwexeshana. Umbutho uyazixhasa ngokunikela ngesisa, ngokusebenzisana noluntu nangokuthengisa ukuthengisa okunophawu . Ukuba ungathanda ukwenza umnikelo weenwele, qinisekisa ukuba iponytail yakho ubuncinci iisentimitha ezisibhozo ubude, kwaye uyithumele:
yintoni umbala we lent
Izinwele Sabelana ngumbutho wesisa owamkela iminikelo yeenwele esetyenziselwa ukwenza iiwigi zabantu abadala nabantwana abachatshazelwa yilahleko yeenwele ebangelwe zizizathu zonyango. Iqela alihlawulisi mali kubamkeli beewigi. Eli qela lifuna umnikelo osezantsi we-25 yeedola ngomnikelo ngamnye weenwele. Unokukhetha ukuthatha inxaxheba kwinkqubo yabo yokulandela umkhondo wehashe ngokwenza igalelo lemali ubuncinci be- $ 125 xa uhambisa iinwele zakho oziphisileyo. Ngokuthatha inxaxheba kule nkqubo, uya kuba nakho ukubona ifoto yewigi eyenziwe kwizinwele zakho. Ukunikela, kuqala ngenisa ifom yomnikelo nge Izinwele Sabelana ngewebhusayithi . Emva koko, thumela iinwele zakho ku:
I-4 Expressway Plaza Suite
I-LL14 Roslyn Heights, NY 11577
Iingelosi zeNwele zaBantwana (Canada)
Iingelosi zeNwele zaBantwana yingalo yeZwi loMntwana laMazwi. Isiseko ngokwaso sineenkqubo ezininzi, enye yazo ziNwele zeNgelosi. Ingelosi yeenwele ibonelela ngeenwele kubantwana abahlelelekileyo ngokwezezimali eCanada. Ukuba useCanada kwaye ungathanda ukunceda, ungathumela umnikelo weenwele zakho ku:
uhlamba njani iimpahla ngaphandle kokuhlamba impahla
3034 Palstan Rd., Suite 301
ukwanelisa njani umfazi okhulileyo ngesondo
Ngokubanzi Njani-kwiiMfuno zokuNikela ngeenwele
Ngaphambi kokuba usike iinwele zakho kwaye uzithumele, qiniseka ukuba ujonga iimfuno zomnikelo wesisa osithandayo. Ngokubanzi, ezi zikhokelo zilandelayo zixhaphakile kuyo yonke imibutho eyamkela iinwele:
Iinwele kufuneka zibekwe kwi-ponytail okanye eluka kwaye zisikwe ngaphezulu kwesiphatho sehashe.
Ubude beeminikelo buhluka ukusuka kwii-intshi ezisibhozo ukuya kwii-intshi ezili-12.
Izinwele ezisongiweyo zinokulungiswa ngaphambi kokulinganisa ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zomnikelo.
Imaleko ngokulungeleleneyo ilungile, okoko nje owona mfutshane ubuncinci ubuncinci ubuncinci obufunekayo ubude.
Iinwele kufuneka zicoceke kwaye zome.
Izinwele azinakutshintshwa ngemichiza.
Iinwele mazibe zezendalo - ii-synthetics ngokwesiqhelo azamkelwa.
Iinwele ezisuka phantsi azinakusebenziseka.
Ukusika i-ponytail okanye i-braid yakho kufuneka ifakwe kwiiplastiki ze-baggie uze ufake imvulophu
Ngelixa kungafuneki ngokubanzi, kuhlala kuthathelwa ingqalelo ukuba uthumela umnikelo omncinci kunye neenwele zakho ukunceda ukuhlawula iindleko zombutho.
Qiniseka ukuba ufunda kwaye ulandele yonke imiyalelo ngononophelo. Ukuba akwenzi njalo, umbutho awuyi kuba nakho ukusebenzisa iinwele zakho kwaye uya kuba umoshakele.
Ukufumana iinkampani zokuNikela ngeNwele
Uninzi lwee-salon zeqabane ezisebenzisana nemibutho yokunikela ngeenwele, nokuba ibambe iminyhadala yokusika okanye yamkele iminikelo rhoqo. Ukuba ukhetha ukuya kwisalon ekufutshane nawe ukuze wenze umnikelo wakho kunokuba uzinqumle ngokwakho, kuya kufuneka wenze uphando.
Nxibelelana nesisa onqwenela ukunikela ngaso kwaye ubuze ukuba banayo na iminyhadala ecwangcisiweyo okanye amaqabane esalon kwindawo yakho. Umzekelo, ezinye Umboniso oMkhulu iisaloni zamkela iminikelo yeenwele zeeWigs zaBantwana.
Fikelela kwizaloni kwindawo yakho kwaye ubuze ukuba bayadibana na nawaphi na amaqela eminikelo yeenwele. Ukuba akunjalo, buza ukuba abasebenzi be-salon bangazi phi na apho unokunikela khona ngeenwele kufutshane nendawo ohlala kuyo.
Nokuba awufumani salon yendawo enolwalamano nolunye lwesisa, unokufumana eya kuthi isebenze nawe ukuqinisekisa ukuba iinwele zakho zichetyiwe kuthobela umbutho ongathanda ukunikela kuwo.
Umnikelo oTshintsha uBomi
Ukuba ujonge ukwenza umnikelo ngomlinganiso, phantse ifuthe kwangoko, yiyo le. Ukunikela ngeenwele kubantwana abanelahleko yeenwele ngumqondiso onesisa kunye nefuthe elibonakalayo. Isipho kolunye lwezi zinto zokupha ngoncedo lweenwele ligalelo elibonakalayo elinokubutshintsha kwangoko ubomi bomntu bube ngcono.
Ukukhulelwa Esidlangalaleni Iirekhodi Umtshato Decoration Ukupeyinta Izimvo Amaqebengwana Omtshato
Ukuzila Ukutya Kunye Nedetox Diets
Ikati eyamkelweyo ayiyi kuphuma ifihlakele
indlela yokuhlobisa i-arch yomtshato kunye ne-tulle
wenzeni ngosuku lokugqibela lwehlobo
ungawugcina njani umthi ngamaxolo awonakeleyo
kwenzeka ntoni xa inja isifa
indlela yokubopha isikhafu kwisipaji